Nanao taridositra ny fozaorana!!! | news2dago |
Nanao Taridositra Ny Fozaorana!!!
news2dago 16 Febroary, 2009 15:50 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Nivoatra haingana be ny tantara androany satria dia nivadika ny rasa. Izy samy izy ihany no nifandramatra. Teny ampiandohana dia haka ny minisitera no tanjona voalohany na dia efa vitsy dia vitsy aza ny olona teo @ 13mai dia mbola nanapakevitra ny haka minisitera ihany ny mpitari-tolona. Nasaina nialoha làlana ny mpiandry ary ny delegasiona tarihina no manaraka azy. Dia i monja rondefo sy ilay minisitra ny fiarovam-pirenena izany.
Nanala devoly moa ny mpiandry tetsy @ BNI analakely ny mpomba ny tgv ary ny barazy kosa dia eo anolonan'ny RM1 iny avy eo moa dia nanatona ny delegasiona nifampiraharaha teo mazava ny resaka fa tsy mahazo mihoatra eo nareo fa faritra mena ny minisitera hitifitra izy izany angamba no tena marina tao. Niala bala haingana ireto mpitarika ka nilaza fa tsy misy olona intsony ao @ minisitera ka sao mba misy vaditany ao @ mpitolona ao! Tsy nisy vaditany kosa anefa tao @ iretsy mpitolona. Teo vao mody nilaza oe aleo fa atao rahampitso indray ny fakana minisitera fa tsy mety raha izao sao dia lazaina fa mangalatra ao indray isika.
Tezitra ny vahoaka teo ary nitagoronan'ny olona ilay 4x4 misy ny PM ny tetezamita. Nahozongozon'ny olona ilay fiara avy eo. Zay vao taitra ny mpamily ka namelona ny fiara haingana ka nirifatra nakany ambadikin'ny pavillon analakely. Nitomany teo ny vahoaka tena TGV irigiriny avy eo ka nilaza mihitsy oe "Tsy ianareo no nanana havana maty teny ambotsirohotra ko dia avelanareo toy izao izahay". Aiza i Andry aiza i Andry. Avy hatrany moa dia namaly ny ao @ radio viva oe lasa nakeny @ 13mai izy fa tsy nitsoaka izany. Nidina nakeny indray ny olona tsy nisy olona mptarika koa teny. Avy indray dia ny fanamafisam-peo no nogidraina teo lasa nitsoaka koa ireo.
Inona indray zao no atao rahampitso efa manomboka tsy hita tabilao rahateo ireo lohadohany rehetra i Dollin i Rolland sy ny sisa. Efa raikitra rahateo koa ny ady seza satria i Nadine Ramarosona dia nodina fanina sy nomena toerana fa naleo nampiditra ny ekipan'ny Pierrot Rajaonarivelo. Vasoka fotsiny ireto nanomboka ny tolona nafana fo izany!!! Mahatsiaro tena ho tohotra fiakarana fotsiny. Manamarina izany ilay fanagonan-tsonia omena an'Ingahy Andry Rajoelina hampiditra an'i Nadine ho minisitra.
Sarotra ny mitondra vahoaka ary raha tsy mitandrina dia hifoteran'ny hatezerany indray avy eo. Manasarotra ny tolona ihany koa ny hamaron'ny olona tonga teny Mahamasina ny asabotsy lasa teo. Efa lany koa angamba ny vatsy sy ny vola ka tsy hita izay hevitra hitondrana ny tolona avy eo. Ny olana dia miala pa ohatra ny fialana fozaorana ireto dinôzôro ankehitriny ary avelany irery eo ity TGV ity. Karazany nanolom-bato mafana ho azy ihany izireo. Soa lavo ahay hamindra e! mbola lavitra ny dia.